FBC - Waldaaleen hawaasummaa ijaarsa demokraasii keessatti ga’eesaanii akka ba’atan mootummaan ni deeggara
Waldaaleen hawaasummaa ijaarsa demokraasii keessatti ga’eesaanii akka ba’atan mootummaan ni deeggara
Finfinnee, Ebila 13,2009(FBC) – Waldaaleen hawaasummaa ijaarsa sirna demokraasii keessatti ga’ee isaanii akka ba’atan mootummaan ni deeggara jedhan af yaa’iin Mana Maree Bakka Bu’oota Ummataa obbo Abbaa Doolaa Gammadaa.
Waltajjiin marii ijaarsa demokraasii biyyattii, muuxannoo waldaalee siiviikii, rakkoolee fi kallattii gara fulduraarratti xiyyeeffatu Sharaatan Addisitti gaggeeffamaa jira.
Waltajjicharratti haasaa baniinsaa kan taasisan obbo Abbaa Duulaanis ijaarsa sirna demokraasii fi bulchiinsa gaarii mirkaneessuuf, waldaaleen siivikii, gurmiin ummataa fi waldaaleen ogummaa ga’ee olaanaa akka tabatan himanii, mootummaanis kana galmaan ga’uuf manneen maree sadarkaa sadarkaan jiranii fi waldaalee hawaasummaaf deeggarsa taasisaa jira jedhan.
Waltajjii marii Faanaa Broodkaastiing Koorporeet, Waajjiri Muummee Ministiraa fi Dhaabbata Mootummoota Gamtoomanitti Sagantaan Misoomaa qindaa’uun qopheessan irratti, waraqaan qorannaa waldaaleen siivikii amala addunyaarratti qaban, hirmaannaa fi ga’een isaanii Ityoophiyaa keessatti maal akka fakkaaturratti xiyyeeffatu dhiyaatee mariin irratti taasifameera.
Ijaarsa sirna demokraasii keessattis ta’e, ilaalcha siyaasaa kamuu keessatti ga’een isaanii olaanaa akka ta’e qorannichi ibseera.
Qorannichaanis Ityoophiyaa keessatti waldaalee siivikii ilaalchisee baasii isaanii sirreessuuf labsiin ba’e qaawwa qaba jedhameera.
Kanaan alas deeggarsi alaa argamu gadaanaa waan ta’eef, bulchiinsa baasii isaaniirratti dhiibbaa qaba jedhameera. Waldaaleen kanneenis faayidaa miseensota isaanii kan hin eegsisne waan ta’aniif labsichi fooyya’uu qabas jedhameera.
Ilaalcha siyaasaa mankaraarsummaa sirreessuu fi walitti bu’iinsa ittisuun walitti hidhamiinsi hawaasummaa uumuuf waldaaleen kanneen waan barbaachisaa ta’aniif isaan cimsuun murteessadha jedhame.
Oduuwwan Biroo « Itiyoophiyaan Fooramii ‘Belt and Road’ Chaayinaatti geggeeffamu irratti nihirmaatti	Laga Xaafoo Laga Daadhiitti giddu galli gabaa qonnaan bultootaf ijaarramuufi »